Jolay 19, 2018 Admin
Blockchain fandaniana mba namely efa ho $ 12b amin'ny 2022
Nisy tatitra vaovao navoakan'ny Data International Corporation manantena fandaniana amin'ny blockchain vahaolana hampitombo isan-taona amin'ny fitomboana tahan'ny efa ho 75% ny 2022. mitondra ny lohateny hoe ny “Maneran-tany Isaky ny Tapa Blockchain Mitsitsy Vola Guide” mpandinika amin'ny manantena mafy tanteraka fandaniana amin'ny tetikasa ao amin'ny blockchain indostrian'ny namely $11.7 lavitrisa in 2022 irery, ampitahaina amin'ny $1.5 lavitrisa antenaina mba ho lany 2018.
Ny tatitra koa nanampy fa “blockchain sehatra rindrambaiko no ho lehibe indrindra ny handany sokajy ivelan'ny sokajy asa ary iray amin'ireo sokajy mitombo haingana indrindra ankapobeny, miaraka amin'ny rindrambaiko fiarovana.” Ny tatitra dia manazava fa tahirin-kevitra mampiseho tanteraka ny $552 tapitrisa no lany tamin'ny blockchain ny sehatra ara-bola irery ao 2018. Ny fizarana vola sy ny asa ny sehatry ny tatitra $334 tapitrisa.
trueDigital nandefa tsena-mpanao-monina Bitcoin Price Index
trueDigital Holdings, mpitarika developer ny rafitra-kilasy Hafanàm-po an-pananana varotra vahaolana, dia miara-miasa amin'ny 10 liquidity mpanome tolotra ao anatin'izany Genesis Global Trading, XBTO Group, Circle, DV Chain, Hehmeyer sy Altonomy mba hamoronana Mpanao voalohany tsena miorina Bitcoin Pricing Fanondroana ta-hametraka fenitra vaovao ho an'ny tsena pananana nomerika maneho robustness sy ny mangarahara eo amin'ny fifanakalozana ara-antsinjarany Bitcoin Pricing composites.
Michael Moro ny Genesisy Global Trading nanao hoe: “Ny niomerika pananana tsena dia mbola tanora, indrindra fa ho an'ny fikambanana ara-bola, trueDigital dia nampiasa fomba tsara fanorenana ny singa ilaina mba nivoatra tontolo iainana izany ary ataovy onenana ho an'ny orinasa mitady hatsiaka ny fananan'ny nomerika. OTC indices no dingana manaraka nandroso teo maturation ny tsena.” Niforona tamin'ny volana Martsa 2018, TDH mikasa ny hanomboka ny nifehy, Sampanteny tsena ho an'ny orinasa fananan'ny nomerika.
rehetra “Big Four” auditors ny fitsarana ara-bola ho an'ny sehatra blockchain tatitra
Izao tontolo izao 4 Tatitry lehibe indrindra orinasa - Deloitte, ey, KPMG sy PwC - no manatevin-daharana ny vondrona 20 banky in Taiwan ny fitsarana ny asa fanompoana ho an'ny fanaraha blockchain orinasa-panjakana’ tatitra ara-bola vonjimaika. Araka ny vaovao ao an-toerana, mahatonga ny sehatra vaovao ny orinasa-bahoaka’ tahirin-kevitra amin'ny raharaham-barotra blockchain, izay mandray anjara toy ny banky validators.
Izany dia mamela Tatitry orinasa hijery varotra amin'ny alalan'ny traceable sy hanova-porofo rojo ny angon-drakitra in nozaraina fomba, ny fanamorana sy ny fandraisana ho mpikambana automating dingana. Taiwan ny Financial Information Service Co. Miandrandra ny teknolojia vaovao mba hampihenana ny fotoana fanamarinana avy “tapa-bolana” ny “ao anatin'ny iray andro.” Taorian'ny fotoam-pitsarana, ny manantena mafy ny hakodian'ny olona ny fanaraha fanompoana ho an'ny 1,400 orinasa-panjakana voasoratra ao amin'ny nosy taona manaraka.
Korea Atsimo drafitra hetra perks ho an'ny blockchain startups
Ny governemanta Koreana Atsimo dia nanambara ny drafitra mba hamerina handinika ny lalàna amin'izao fotoana izao mba hanitatra hetra tombontsoa ho an'ny orinasa izay mifantoka amin'ny fampandrosoana ny teknolojia nascent, anisan'izany ny blockchain, izay tafiditra ao amin'ny firenena noho ny zava-baovao hanoto fitomboana. Tax ny tahan'ny tokony hahena ho an'ny orinasa mifandray amin'ny isan-karazany 157 “vaovao-fitomboana teknolojia” in 11 faritra.
Ny governemanta hoy koa tsipiriany ny soso-kevitra dia nanambara tao amin'ny Jolay 26, miaraka amin'ny fanovana antenaina hitondra fiantraikany amin'ny lafiny voalohany ny 2019. Ao amin'ny vaovao mifandraika, Korea Atsimo ny Minisitry ny Siansa sy ny ICT vao haingana nilaza fa mikasa ny vola $9 tapitrisa ny faran'ny 2019 mba hanohanana blockchain mpanamory fandaharana amin'ny fanompoana ho an'ny besinimaro enina toerana.
Square mizara namely andro rehetra-avo amin'ny mpampiasa vaovao NY mahazo varotra Bitcoin in-App
Nizara ny Square Inc. mihidy amin'ny avo taorian'ny vaovao nilaza fa ny orinasa nahazo ny fahazoan-dàlana mba tokony hamela Bitcoin varotra eo amin'ny rindrambaiko Cash in New York. Ny orinasa dia nahazo fahazoan-dalana virtoaly vola amin'ny New York State ny Alatsinainy.
taloha, Cash App mpampiasa any New York tsy afaka hividy sy hivarotra Bitcoin. Bitcoin ara-barotra io dia azo jerena ao amin'ny rindrambaiko Cash in 48 Hoy ny, namela fotsiny Georgia sy Hawaii ho roa ihany izay tsy mamela Bitcoin varotra eo ny fampiharana. Mizara Square dia ny 178% tao anatin'ny 12 volana, raha ny S&P 500 nahazo 14%.
Bitcoin Investment Trust manampy ~ $ 10m amin'ny fampiasam-bola vaovao isan-kerinandro
Grayscale Investments, ny petra-bola ao ambadiky ny Bitcoin mpamatsy Investment Trust, nilaza fa efa ho ny onboarding $10 tapitrisa ao amin'ny fampiasam-bola vaovao isan-kerinandro, ary ny ankamaroan'ny izay renivohitr'i avy amin'ny rafitra mpampiasa vola. The New York miorina mafy, tompony ny Digital Sandam-bola Group, nanao ny fanambaràna amin'ny vao-navoaka Digital Asset Investment Report, antsipirihany ny fampiasam-bola izay orinasa fampisehoana noho ny tapany voalohany 2018.
Institutional mpampiasa vola maneho ~ 50% ny fitambaran'ny fampiasam-bola (~ $ 250M) ho Grayscale vokatra. Nanan-karena sy ny mpivarotra mpaninjara vola fisotroan-dronono isan-mahaforona 20% tsirairay ihany koa. Ankoatra ny BTC Investment Trust, Grayscale tahirim-bola vokatra hafa dia ahitana ny Digital Large Cap Fund, ny mafy Fanondroana vokatra voalohany, ary ny olona iray fampiasam-bola tahirim-bola ho an'ny Litecoin.